Bogga ugu weyn » posts » Jebinta Wararka Safarka » U safrida Milan, Venice ama Rimini? MAYA! Waqooyiga Talyaaniga oo kuxiran
Jebinta Wararka Safarka • Fursadaha maalgashi • Wararka safarka Talyaaniga • kale • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Warka Safarka Safarka
U safrida Milan, Venice ama Rimini? MAYA! Waqooyiga Talyaaniga oo kuxiran
Qorsheynta safarka iyo booqashada Milan ama Venice? Ma awoodid! Coronavirus ayaa kaliya joojisay Milan, Venice, iyo 12-14 gobollo kale oo ka tirsan Talyaaniga. Dalxiiskii Milan iyo Venice waxaa kaliya lagu ciribtiray tallaabo quus ah oo uu dhigay Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte. Ma cadda haddii sharcigan uu ka kooban yahay 12 ama 14 gobol oo ka tirsan Gobolka Lombardy ee Talyaaniga. 5883 kiis oo Coronavirus ah oo ku faafay Talyaaniga, ayaa dowladda Talyaanigu xaddiday tallaabada 10-16 milyan oo qof, oo ay ku jiraan dalxiisayaal.
Wadanka yar ee San Marino wuxuu kaliya haystaa 38,000 oo qof, laakiin 23 kiis oo ah COVID-19.
Markii la kordhiyay riwaayadda "aagga cas" ee ka saarista guud ee Talyaaniga iyadoo la isku dayayo in la xakameeyo COVD-19. Waxay ka kooban tahay labadaba awoodda dhaqaale ee faragooysta iyo xudunta dalxiiska ee Venice.
Ma jiri doonto wado laga galo ama laga baxo. Iskuulada, jaamacaduhu way xiran yihiin, xitaa safarada aroosyada macquul ma ahan. Ciddii jabisa amarkan deg-degga ah waxay wajaheysaa 3 bilood oo xabsi ah.
Iskuulada iyo jaamacadaha ayaa hakad la geliyay ilaa iyo 3-da Abriil.
Dhammaan dhacdooyinka cayaaraha ee gobolladaas waa la hakinayaa, marka laga reebo dhacdooyinka xirfadeed. Daawade looma ogolaan doono munaasabadaha mihnadeed.
Dadka meelaha salaada kujira oo istaagaya 1 mitir midba midka kale.
Baararka iyo maqaayadaha lagu fulinayo kala fogaynta bulshada.
Shaqaalaha caafimaadka looma ogola inay fasax qaataan.
Ma cadda haddii tallaabooyinkan ay ku jiraan wareegtada raiisul wasaaraha. Waxay saameyn ku yeelan kartaa in ka badan 10 milyan iyo ilaa 16 milyan oo qof oo ku nool Talyaaniga.
eTurboNews arkay tisaga xaalad horumarinaya on Febraayo 23 maqaal.